Igumbi elimnandi nelizimeleyo kwiziko leSedan
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguNunzia
Igumbi elizimeleyo nelikhululekileyo kummi, kunye nebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi ye-sofa efanelekileyo kubantwana ababini. Igumbi lokuhlambela kunye nezindlu zangasese eziphezulu zigcinelwe wena.
Ndiqesha igumbi lesibini, kodwa kuphela xa liqela elinye okanye intsapho enye.
Indawo yokuhlala isedolophini kwaye yonke into iyafikeleleka ngeenyawo, kumbindi wedolophu, inqaba, zonke iintlobo zeevenkile. Ukupaka ezitalatweni kuyenzeka kwaye kusimahla kodwa kunokuba nzima ngamaxesha athile emini, nangona kunjalo, kukho indawo yokupaka iisuphamakethi ezim 150m kude. Ayifanelekanga kubantu abanokuhamba okuncitshisiweyo (izitebhisi). Izilwanyana azamkelwa. Izixhobo zokukhathalela abantwana ziyafumaneka. Ukuba kukho abantu abadala ababini kuphela gumbi kodwa ufuna zombini ebhedini kunye esofeni, apho kuya kubakho ulwando euro 10 iindleko impahla ekufuneka ifakwe kwi intengo, nceda undazise xa isicelo ugcino.
Ukunokwenzeka kwegumbi lokulala lesibini elikhulu elinebhedi ephindwe kabini.
Icandelo lesibhedlele sesithili esiphilayo, kufutshane nedolophu. Zonke iivenkile ezikufutshane. Maxa wambi kusenokubakho iingxaki zokupaka. Kwi-150m, indawo yokupaka iivenkile ezinkulu ingaba sisisombululo.
Ndihlala ndonwabile ukwamkela abahambi ekhayeni lam. Ndiyaqinisekisa ukuba ndiyafumaneka kodwa ndiyayihlonipha imfihlo yakho. Indawo yokuhlala ikwimigangatho emibini oku kuya kukuvumela ukuba uze kwaye uhambe ngenkululeko epheleleyo kunye nokuzimela. Nangona kunjalo, ukuba kuyimfuneko, ungaza kwaye unkqonkqoze kumnyango wendawo yokuhlala kwam; Ndiya kukuvuyela ukukunika lonke ulwazi onokulufuna.
Ndihlala ndonwabile ukwamkela abahambi ekhayeni lam. Ndiyaqinisekisa ukuba ndiyafumaneka kodwa ndiyayihlonipha imfihlo yakho. Indawo yokuhlala ikwimigangatho emibini oku kuya kukuv…
Inombolo yomthetho: 13566*02
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sedan